५० रूपैयाँमा काठमाडौंमै सादा खाना, ६० रूपैयाँमा मासु भात। हेर्नुहोस भिडियो – News543Online
५० रूपैयाँमा काठमाडौंमै सादा खाना, ६० रूपैयाँमा मासु भात। हेर्नुहोस भिडियो
March 23, 2021 adminLeaveaComment on ५० रूपैयाँमा काठमाडौंमै सादा खाना, ६० रूपैयाँमा मासु भात। हेर्नुहोस भिडियो
लक्षित वर्गभन्दा अरु अर्थात् पैसा तिरेर खान सक्नेलाई सादा खाना एक सय रूपैयाँ र मासुसहितको खाना सेटलाई ११० रुपैयाँ तोकेका छौं। कृष्णहरिले भने, “यसो गर्नुको उद्देश्य भनेको सामान्य मानिसबाट अलि बढीमा खाना खुवाउँदा आएको केही नाफा लक्षित वर्गको लागि होस् भन्ने हो
बंगलादेशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा आगलागी, एक हजार बढी घर जलेर नष्ट
यी नै हुन् आज बिहान स्कूल बस दु’र्घ’टना मा परी मृ’त्यू भएकी अस्मिता !
अबको चुनावमा नेकपा एमाले एक्लैको यसरी ल्याउछ दुई तिहाई बहुमत! के.पि शर्मा ओलि
Plz फोटो छोएर rip लेख्नुहोस खाग काटिएका अवस्थामा भेटियो मृत गैँडा
पैसा सबैको हातहामा हुन्छन खाना नपाएर कोहि नेपाली भोकै मर्दैन के.पि शर्मा ओलि